Apple Kutangisa Yekutenda Chiitiko Dambudziko | Ndinobva mac
Gore rino Apple ichatangisa iro Dambudziko rebasa reKutenda
Eiye Zuva rekutenda richave zvakare riine dambudziko Rekuita yevashandisi veApple Watch gore rino. Mune ino kesi, ndezvekutora menduru neirovedzo zvishoma "zvakaoma" kupfuura iyo yekupedzisira yatange tichiona.
Izvo ndezvekutora menduru uye zvakasarudzika zvitambi zvekutumira mumameseji edu, asi zviri pachena kuti chii zviri zvekukurudzira mukana wekudzidzira saka zvinogara zvakanaka kumushandisi. Zuva iri rinopembererwa musi weChina wechina wemwedzi waMbudzi muUnited States, saka tiri kutaura nezveChina chinotevera chema28.
Apple inofanirwa kuwedzera matambudziko aya zvakanyanya here?
Uye isu tinofungidzira kuti panguva ino dambudziko reApple Watch Activity richasvika kune vese vashandisi kunyangwe iri bato rechinyakare reAmerica senge ichangoburwa Veterans Day. Muchidimbu, izvo zvatinoda kutaura ndezvekuti hazvingavabhadharise chero chinhu kuisa aya marudzi ezvinetso kune dzimwe nzvimbo kunze kweUnited States kana kutombovatendera kuti vaite chiitiko ichi kunyangwe usiri vekunyika kwavo. Aya matambudziko anokurudzira vanhu kufamba uye vanogara vakanaka.
Kuti utore bheji uye zvimiti zvakasiyana, zvinofanirwa kuitwa nevashandisi ndeizvi zadzisa kufamba, kumhanya, kana wheelchair Workout inokwana 5K. Ichi chinetso chakati kwirei kupfuura chemberi cheVeterans, icho chaive chekuita chiitiko chemuviri kwemaminetsi gumi nerimwe chete, saka tinofungidzira kuti iri harisi dambudziko rinoitwa nemunhu wese asi zvakanaka kunyangwe iri yekuyedza. Ndinovimba izvi zvinowoneka kune vese vashandisi veApple Watch kunyangwe zvisiri pachena uye ndinorangarira kuti gore rapfuura zvanga zvisina kudaro ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Gore rino Apple ichatangisa iro Dambudziko rebasa reKutenda
Zviri pamutemo! Iyi ndiyo nyowani 16-inch MacBook Pro
Aimbove HBO CEO ave kuda kusaina chibvumirano neApple TV +